calendar 2013 “Rocking Chair” Kalendari - Dhizaini magazini
Kalendari Iyo Rocking Chair inosunungura yekarenda desktop kare mune chimiro chechigaro chidiki. Tevedza chinongedzo kuunganidzira chigaro chinodonhedza icho chinodzungudza kumashure uye senge chaicho. Ratidza mwedzi uripo pachigaro kumashure, uye mwedzi unotevera pachigaro. Hupenyu neKugadzira: Zvemhando zvigadzirwa zvine simba rekugadzirisa nzvimbo uye kushandura pfungwa dzevashandisi vayo. Vanopa kunyaradza kwekuona, kubata uye kushandisa. Ivo vanozadzwa neakareruka uye chinhu chekushamisika, inovandudza nzvimbo. Zvigadzirwa zvedu zvepakutanga zvakagadzirwa zvichishandisa pfungwa ye "Hupenyu neKugadzira".
Zita rechirongwa : calendar 2013 “Rocking Chair”, Vagadziri zita : Katsumi Tamura, Izita remutengi : good morning inc..
Kalendari Katsumi Tamura calendar 2013 “Rocking Chair”